बलिउड स्टार शाहरुख खान अमेरिकी बिमानस्थलमा नियन्त्रणमा, यस्तो छ कारण ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
बलिउड स्टार शाहरुख खान अमेरिकी बिमानस्थलमा नियन्त्रणमा, यस्तो छ कारण !
प्रकाशित मिति : श्रावण २८, २०७३ शुक्रबार
बलिउड स्टार शाहरुख खानलाई अमेरिका आउने क्रममा यसपटक पनि बिमानस्थलमा अध्यागमनका अधिकारीहरुले केहीबेर नियन्त्रणमा लिएका छन् । उनलाई अमेरिका आउने क्रममा शुक्रबार लस एन्जलस इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा नियन्त्रणमा लिइएको हो । भारतका लागि अमेरिकी राजदूतले यसप्रति माफी माग्दै आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भनेर सम्बन्धित निकायसँग काम गरिरहेको जानकारीदिएका छन् ।
शाहरुख खानलाई हरेक पल्ट अमेरिका आउँदा अध्यागमनका अधिकारीहरुले बिमानस्थलमा नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दै आएका छन् । यसअगाडि सन् २०१२ मा पनि शाहरुख खानलाई न्युयोर्कको ह्वाइट प्लेन विमानस्थलमा ९० मिनेट नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको थियो । त्यसैगरी सन् २००९ मा न्युजर्सीको नेवार्क विमानस्थलमा उनलाई २ घण्टा नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यतीबेला उनलाई भारतीय दूतावासको हस्तक्षेपपछि उनलाई छाडिएको थियो ।
आफूलाई बिमानस्थलमा नियन्त्रणमा लिइएकोप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन् । हरेकपल्ट अमेरिकी विमानस्थलमा अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिनु पीडादायी भएको उनले ट्वीटरमार्फत बताएका छन् । तर त्यो समयमा आफूले केही राम्रा पोकेमनहरु समातेको भन्दै उनले ट्वीट गरेका छन् । उनलाई नियन्त्रणमा लिइएकोबारे अध्यागमन अधिकारीहरुले केही बताएका छैनन् । तर अमेरिकी विदेशमन्त्रालयकी अधिकारी निशा विसवालले खानलाई ट्वीट गर्दै अमेरिकी कुटनीतिज्ञले समेत अध्यागमनमा अतिरिक्त छानविनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै शाहरुख खानले भोगेको समस्याप्रति माफी मागेकी छिन् । भारतका लागि अमेरिकी राजदूत रिच वर्माले पनि ट्वीटरमार्फत खानसँग माफी मागेका छन् ।
सन् २०११ मा भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दूल कलामलाई न्युयोर्क विमानस्थलमा खानतलासी लिइएको थियो भने सन् २०१० मा अमेरिकाका लागि तत्कालिन भारतीय दूत मिरा शंकरलाई मिसिसिपी विमानस्थलमा सुरक्षा अधिकारीहरुले उभिएको स्थानबाट बाहिर निकालेर खानतलासी गरेका थिए । उनले सारी लगाएका कारण लाइनबाट बाहिर निकालेर खानतलासी लिइएको अनुमान गरिएको थियो । त्यतीबेला नै भारतीय कुटनीतिज्ञ हरदीप पुरीलाई टेक्सासको बिमानस्थलमा उनको पगरी उतार्न लगाइएको थियो । शिख हरदीपले त्यसो गर्न अस्वीकार गरेपछि उनलाई केहीबेर नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिएको थियो ।
अमेरिकाको वाचलिष्टमा त्यस्तै नाम गरेका व्यक्ति रहेका कारण शाहरुख खान हरेकपल्ट अध्यागमनका अधिकारीहरुको नियन्त्रणमा पर्ने गरेका छन् । वाचलिष्टमा रहेको वा नामसँग मिल्ने कुनै व्यक्तिले बोर्डिङ पास लिनासाथ वा पासपोर्ट स्क्यान गर्नासाथ उसको नाम अध्यागमनका अधिकारीहरुको सिस्टममा आउने भएकाले अध्यागमनका अधिकारीहरुले त्यो व्यक्तिबारे निगरानी गर्ने गरेका छन् । वाचलिष्टमा रहेका कतिपयको मेसिनबाट बोर्डिङ पास निकाल्नमा नै समस्या हुनेगर्छ । शाहरुख खान नाम गरेको कुनै व्यक्ति अमेरिकाको वाच लिष्टमा रहेका कारण बलिउड स्टार शाहरुख खान अमेरिका आउने क्रममा हरेक पल्ट नियन्त्रणमा पर्ने गरेको जनाइएको छ । वाचलिष्ट विभिन्न प्रकारका हुन्छन् ।
आतंकवादी जाँचबुझ डाटाबेस संदिग्ध व्यक्तिहरुका बारेमा एफबीआईले तयारपारेको डाटाबेस मुख्य वाचलिष्ट हो । यो सुचीले सरकारी अधिकारीहरुलाई संदिग्ध व्यक्तिको पहिचान गर्नमा सहयोग पुर्याउने गर्छ । यो डाटाबेसमा कानुन कार्यान्वयन इकाई, होमल्याण्ड सेक्युरिटी, अमेरिकी खुफिया संस्थाहरु र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुको पहुँच हुने गर्छ । सन् २००१ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलापछि अमेरिकाले सन् २००३ मा यो सुची तयार गरेको हो । अमेरिकी सकारका निकायहरुले यस्तो सुचीका लागि व्यक्तिहरुका नाम तयार गर्छन् । त्यसको छानविनपछिमात्र व्यक्तिको नाम सुचीमा चढाइने एफबीआईले जनाएको छ ।
सन् २०१४ मा ८ लाख व्यक्तिलाई यो सुचीमा सुचीकृत गरिएको थियो । धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पृष्ठभूमी, राष्ट्रियताका आधारमा व्यक्तिलाई यो सुचीमा नराखिने अमेरिकी सरकारको दावी छ । त्योबाहेक अमेरिकी सरकारका निकायहरुले अन्य प्रकारका वाचलिष्टहरु पनि तयार गरेको हुन्छ । होमल्याण्ड सेक्युरिटीले तयार पार्ने नो फ्लाई लिष्ट र सेलेक्टी लिष्टपनि अन्य प्रकारका वाचलिष्ट हुन् । सेलेक्टी लिष्टमा परेको व्यक्तिलाई विमानस्थलमा नियन्त्रणमा लिएर थप जाँचबुझ गर्ने गरिन्छ । डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस, इन्टरपोल लगायतका पनि अलग अलग वाचलिष्टहरु हुने गर्छन् । कुनै पनि वाचलिष्टमा रहेको व्यक्ति बिमानस्थलमा अतिरिक्त जाँचबुझमा पर्नेगर्छ । लाखौं भारतीय र दक्षिण एसियाली नामहरु इस्ता वाचलिष्टहरुमा रहेका छन् ।
कुनै व्यक्तिलाई वालिष्टमा राख्ने क्रममा गल्ती भएको भएमा वा नाम जुधेको भएमा विश्वका जुनसुकै देशमा रहेका व्यक्तिले पनि त्यसबारे उजुरी गर्नसक्छ । त्यस्तो उजुरी अनलाइनबाट वा हुलाकबाट पनि पठाउन सकिन्छ । होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अनुशार हरेक महिना २ हजार भन्दा धेरै यस्ता उजुरीहरु आउने गर्छन्, जसले वाचलिष्टबाट आफ्ना नामहरु हटाउन चाहन्छन् । उजुरी परेको १५ दिनदेखि ४० दिनभित्र समस्याको सम्बोधन गरिने होमल्याण्ड सेक्युरिटीको भनाई छ । गल्तीले छानविनमा परेका यात्रुहरुको गुनासो बढेपछि टीएसएले सेक्योर फ्लाइट नामको नयाँ प्रणालीको पनि विकाश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि न्यूयोर्क राज्य सरकारले धेरै सार्वजनिक स्थानमा बन्दुक बोक्न नपाउने नियम लागू गरेको